Gadgets - Gadget သတင်းများ Gadget သတင်း
En အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသည် ၄ င်းကိုဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိပြီးမှတ်သားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များကိုပေးသည်။ ဒီနေ့ထောင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ် အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အရှိဆုံးမူရင်းမှစျေးအကြီးဆုံးအထိ gadget များ သူတို့ကပြိုင်ဆိုင်မှုကျော်သိသိသာသာနည်းပညာတိုးတက်မှုကိုဆက်ကပ်။ သူတို့ကိုတွေ့ဖို့ Actualidad Gadget ကသင့်ကိုကမ်းလှမ်းထားသည် နောက်ဆုံးသတင်း သို့ဖြစ်။ သင်တို့အားလုံးသိသည် နည်းပညာထုတ်ကုန်လွှတ်တင်မှုနှင့်အရှိဆုံးအံ့သြဖွယ် gadgets စျေးကွက်က။
por Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် လွန်ခဲ့တဲ့5ရက်ပေါင်း .
အိမ်သန့်ရှင်းရေးအတွက် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ Dreame ထုတ်ကုန်တစ်ခုနဲ့ အခုတလော အရမ်းခေတ်စားနေတဲ့ အိမ်တွေကို ပြန်ရောက်နေပါပြီ။
Smartmi Air Purifier၊ အလွန်အရည်အချင်းပြည့်မီသော သန့်စင်ဆေးနှင့် H13 စစ်ထုတ်မှုများပါရှိသည်။
por Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ် .
လေသန့်စင်မှုဟာ ခေတ်မီတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပေမယ့် အရေးမကြီးပါဘူး၊ ငါတို့မှာ...
Soundcore သည် ထုတ်လုပ်ရေးမှတစ်ဆင့် ဤကြမ်းတမ်းသောကဏ္ဍတွင် သူကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ထားသည့် အသံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
por Rafa Rodríguez Ballesteros လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
Actualidad Gadget တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အနှစ်သက်ဆုံးအရာကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပြီး၊ ဂက်ဂျက်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို စမ်းသပ်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကို သင့်အား ပြောပြပါသည်။ မဟုတ်ဘူး…
ANNKE NC400၊ သင်လိုအပ်သောစောင့်ကြည့်ကင်မရာ
ဒီနေ့ငါတို့အိမ်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေပိုများလာတယ်။ ဒါပေမယ့်စနစ်တစ်ခုတော့ရှိတယ် ...
EZVIZ eLIFE အသစ်နှင့်တွေ့ဆုံပါ
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီအချိန်များတွင်ခေတ်စားဆုံးအသုံး ၀ င်ပစ္စည်းများအနက်တစ်ခုအကြောင်းကိုပြောနေကြသည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်ကမထင်မှတ်နိုင်သောအရာတစ်ခု ...
por Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
Jeff Bezos ၏ကုမ္ပဏီသည်ဒီမိုကရေစီနည်းကျနှင့်စမတ်တီဗီကဏ္sectorတွင်ဆက်လက်စိုးမိုးလျက်ဤနည်းအတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။
por Gadget သတင်း လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
၃၆၀ အကာအကွယ်ရှိသောဗွီဒီယိုစောင့်ကြည့်ရေးကင်မရာများသည်အဆောက်အ ဦး တစ်ခုအတွင်းရှိစက်ရုံကြီးများကိုခွဲခြားထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ခွဲထုတ်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်။
por Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
ဤနေရာတွင်မကြာသေးမီက Roborock S7 ကိုစက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်ကိုစိစစ်ပြီး၊ အမှန်တကယ်အံ့ results ဖွယ်ကောင်းသည့်ရလဒ်များကိုပေးသည်။
WiFi6ဟာလူကြိုက်များလာပြီး high-end ထုတ်ကုန်အများစုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက၎င်းကိုတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။
Realme သည် ၄ ​​င်း၏ထုတ်ကုန်များမှငွေပမာဏအတိအကျသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်နယ်မြေတစ်ခုတွင် Xiaomi ကိုမတ်တပ်ရပ်ခြင်းများကို ဆက်၍ ပြုလုပ်နေသည်။